Nên mua Smart tivi của hãng nào phù hợp? LG, Samsung, TCL hay Sony? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Nên mua Smart tivi của hãng nào phù hợp? LG, Samsung, TCL hay Sony? | Muasalebang in Muasalebang
1 Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ye-Smart TV emakethe njenge-Sony, LG, Samsung noma i-TCL, njll. Ngenxa yalokho, kwenze kwaba nzima kubasebenzisi ukukhetha imikhiqizo abazoyisebenzisa. Esihlokweni esilandelayo, ake sihlole izici ezivelele ze-TV yomkhiqizo ngamunye nge-Dien May XANH ukuze kube lula ukukhetha!
1.1 kuqalaIsitayela, umklamo
1.2 2Ikhwalithi yesithombe
1.3 3Ubuchwepheshe bomsindo
1.4 4Isixhumi esibonakalayo se-TV nokuxhumana nezici zokwabelana
1.5 5Qhathanisa ama-Smart TV i-Samsung, i-LG, i-TCL ne-Sony
1.6 6Ingabe kufanele uthenge i-Smart TV i-Samsung, i-LG, i-TCL noma i-Sony?
Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ye-Smart TV emakethe njenge-Sony, LG, Samsung noma i-TCL, njll. Ngenxa yalokho, kwenze kwaba nzima kubasebenzisi ukukhetha imikhiqizo abazoyisebenzisa. Esihlokweni esilandelayo, ake sihlole izici ezivelele ze-TV yomkhiqizo ngamunye nge-Dien May XANH ukuze kube lula ukukhetha!
Imikhiqizo ye-TV yonke inemiklamo ehlukene enamamodeli ahlukene akha ubuhle obuhluke ngokwedlulele, obuhle futhi obuhehayo.
Ama-TV e-Samsung adume ngokuklama kwawo okuzacile, imiphetho yesikrini se-TV iya iba mncane futhi ibe mincane, ihlinzeka ngolwazi oluhle lokubuka imuvi.
Eminye imiklamo evelele yama-Samsung TV ingashiwo njenge: Idizayini ye-Infinity One, idizayini ye-Air Slim, idizayini yohlaka lwezithombe.
Ikakhulukazi ngomugqa we-TV we-Samsung Lifestyle oyingqayizivele kakhulu, ongazungeziswa ngokuvundlile, osanda kwethulwa inkampani, wephule yonke imikhawulo ye-TV yendabuko, uvula inkathi entsha.
Kusukela 32 amayintshi 110 amayintshi.
Ukudweba odongeni: Ama-LG TV ngokuya athambekela ekubeni nemiklamo emincane, ngisho nemiklamo emincane kakhulu kunama-smartphone, aletha isigaba sesimanjemanje.
Izitika zodonga: Usayizi omncane ongu-2.57 mm kuphela ufana nomdwebo odongeni, omuhle kokubili futhi onikeza ikhwalithi yokubonisa yezinga eliphezulu.
Roll TV: Akukhona nje kuphela ukuthi isikrini se-TV sizacile kakhulu, kodwa singagoqeka kalula sibe silondoloza izinzuzo zaso zekhwalithi engokwemvelo.
Kusuka ku-32 kuye ku-86 amayintshi.
Uchungechunge lwe-TCL TV luphethe idizayini yesimanje enamamodeli amaningi ahlukene.
Ikakhulukazi, i-TCL TV iphinde yethula ama-TV we-4K QLED anomklamo ongenamngcele.
Ngaphandle kwalokho, izinto zomngcele zenziwe nge-alloy ehlala njalo futhi enhle kakhulu.
Kusuka kuma-intshi angama-32 kuye kwangama-85 amayintshi.
I-Sony idume ngedizayini yayo yesimanjemanje, ewubukhazikhazi kanye nesezingeni eliphezulu enosayizi abasuka kumayintshi angu-32 ukuya kwangu-85.
Ngaphezu kwalokho, u-Sony uphinde ahlanganise nezikrini ezincane nezihluke kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi.
Kusukela 32 kuya 65 amayintshi.
Xem Thêm Android Tivi Panasonic 4K 49 inch 49FX550V giá tốt ,có trả góp | Muasalebang
Ulayini womkhiqizo wakwaSamsung we-The Sero onekhono lokuzungezisa uvundlile uqonde mpo
I-LG “rollable” 4K OLED TV
AbakwaSamsung baphethe uchungechunge lwe-QLED oluletha impumelelo yobuchwepheshe ngokuya ngezithombe, ubuhlakani bokwenziwa, kanye nekhwalithi yesithombe ephelele.
AbakwaSamsung baphethe iphrosesa ye-Quantum enamandla ukuthuthukisa ikhwalithi yesithombe nokwandisa ukukhanya.
Ubuchwepheshe be-Quantum Dot bunamandla okukhiqiza kabusha u-100% webanga lemibala futhi bulungise ngokuzenzakalelayo imibala kuma-TV esizukulwane esisha, ukuze uthole amafreyimu ezithombe akhanya ngokukhazimulayo.
Ubuchwepheshe be-Quantum HDR 2000 nits buhamba phambili kulo lonke uhlaka olunemibala yangempela yokuphila kanye nokugqama okuhle, nokugqama okujulile.
Ikhwalithi yesithombe yakwa-LG yaziwa ngezithombe zayo ezibukhali:
Ukuba nobuchwepheshe obuyisisekelo: Amaphaneli e-IPS ayakwazi ukumelana namandla angaphandle, ngaphandle kokubenyezela lapho esetshenziswa.
Ngesizukulwane sesithathu se-α9 AI 8K chip enobuchwepheshe bokwenziwa kobuhlakani ukuze kuthuthukiswe izithombe zibe ikhwalithi engu-8K.
Ubuchwepheshe be-AI 8K Upscaling buyakwazi ukuhlaziya okuqukethwe, bukhuphule ukucaca.
Ikhwalithi yesithombe ehlaba umxhwele, nethembekile:
Ubuchwepheshe be-Quantum Dot (QLED) busiza ukukhiqiza kabusha imibala yeqiniso kuyo yonke imininingwane, kuze kufike ku-98% wokukhanya.
Ubuchwepheshe be-Mini-LED busiza i-TV ukuthi ibe nokugqama okuphezulu nemibala egqamile.
Ubuchwepheshe be-Dolby Vision obuthuthukisiwe, ikhwalithi yesithombe evelele, umbala wangempela, izinga elithuthukisiwe le-IMAX.
Izithombe ezibukhali, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe obufana nalokhu:
Ubuchwepheshe bokucubungula izithombe be-4K X-Reality Pro busiza ukucubungula izithombe ezingafiphali ngokugqama okuhle.
Ubuchwepheshe bokucubungula izithombe be-XR Triluminos Pro busebenzisa ama-algorithms e-3D ukuze kwandiswe isikhala sombala.
Ubuchwepheshe be-backlight ye-XR Motion Clarity busiza i-TV ukuthi ihambe ngokushesha, kuyilapho igcina ukukhanya nesithombe esihle.
Ubuchwepheshe be-Quantum Dot ku-TCL . TVs
Ubuchwepheshe beDolby Vision kuma-TCL TVs
I-Samsung ingenye yalezo zinhlobo ezihlale zigxile kumsindo omkhulu.
Le nkampani itshala imali emikhiqizweni yayo ye-TV ngobuchwepheshe obukhethekile obufana ne-Object Tracking Sound+ (OTS+), i-DTS Premium Sound 5.1, umsindo we-3D,… ukuze ilethe umuzwa ongokoqobo, onembile kakhulu womsindo, usayizi kokubili ngokubonakalayo nangokuzwayo.
Ngakho-ke, ikhwalithi yomsindo ye-Samsung ihlezi ithuthukiswa ngokuthuthuke kakhulu ukuze abasebenzisi bakuzwe njengokuhlala ethiyetha yamamuvi enomsindo ozungezile oyingqayizivele.
Iningi lemikhiqizo yakwa-LG igxile esithombeni somsebenzisi nakwikhwalithi yomsindo.
I-LG isebenzisa ubuchwepheshe be-Dolby Atmos ukunikeza abasebenzisi umuzwa ojulile womsindo.
Ngaphezu kwalokho, i-LG futhi ihlinzeka ngezithombe ezibukhali kakhulu ezifanele isipiliyoni sokudlala nge-HGiG, G-SYNC,…
Ubuchwepheshe obudumile bokuthuthukisa umsindo be-ClearAudio buletha ikhwalithi yomsindo yemvelo, entsha nenempilo enobuchwepheshe obuvelele obufana ne: S-Force Front Surround, Clear Phase,…
Ubuchwepheshe bomsindo we-3D Surround Upscaling buhlinzeka ngomuzwa womsindo ozungezile ongu-3-dimensional ojabulela isikhala somculo esimbozayo.
Ubuchwepheshe bomsindo Wokulandelela Into+ bucace kakhulu kuma-Samsung TV
Ubuchwepheshe bomsindo we-Dolby Atmos obunama-multi-dimensional kuma-Sony TV
4Isixhumi esibonakalayo se-TV nokuxhumana nezici zokwabelana
Ama-TV akwaSamsung asebenzisa izinhlelo zokusebenza zesimanje nezinhle ze-Tizen OS kanye ne-Smart Hub, ezifanele abantu abaningi ngenxa yezici zazo ezisebenziseka kalula. Ngaphezu kwalokho, inkampani iphinde ihlomise isici sokuxhuma i-AirPlay ku-TV yayo ukuze isakaze imininingwane isuka ocingweni iye kumabonakude kalula kakhudlwana.
Inkampani iphinde yaklama ngokukhethekile isici se-Multi View ukusiza ukufanisa isikrini se-TV nesikrini sefoni.
I-Smart Hub interface kuma-Samsung Smart TV
Uchungechunge lwe-LG TV ikakhulukazi lisebenzisa isixhumi esibonakalayo se-WebOS se-LG Smart TV nesixhumi esibonakalayo Esilula Esilula ku-LG Internet TV. Lokhu kungenye yezindawo ze-LG ezinhle nezisebenziseka kalula.
I-LG ingaxhuma kumadivayisi amaningi ahlakaniphile ahlukene, ikakhulukazi anekhono lokudlulisa ulwazi lusuka ocingweni luye ku-TV, kuhlangene nekhono lokudlulisa ulwazi ngokusebenzisa i-LG TV Plus eqanjiwe.
I-WebOS 4.0 kanye ne-5.0 interface ku-LG Smart TV
Kuma-TV we-TCL, ikakhulukazi isebenzisa isistimu yokusebenza ye-Android 11 enokuxhumana okuhle, okucebile esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-TV ezingaba ngu-7,000, okusiza ababukeli ukuba babe nolwazi oluhlukahlukene lokuzijabulisa.
Ikakhulukazi, ama-TV e-TCL ahlanganisa izici eziningi ezihlakaniphile ezifana nalezi: Usesho olukude lwe-Far Field Voice ukusiza i-TV ibone izwi lakho ukude, kuhlanganiswe ne-TCL AI-IN ukuze ikusize uxhume kalula Xhuma futhi ulawule amadivayisi asekhaya ahlakaniphile njengamalambu okukhanya ahlakaniphile, izikhulumi ezihlakaniphile,…
Uhlelo lokusebenza lwe-TCL TV lwe-Android 11 olunokuxhumana okuhle nesitolo sezinhlelo zokusebenza esicebile
Ama-Sony TV asebenzisa isizukulwane esisha se-Android TV nesistimu yokusebenza ye-Google TV. Ngalesi sikhombimsebenzisi esisha, ungabheka kalula ulwazi nokuqukethwe okuthandayo ngebha yamathuluzi futhi wenze ibha yokusesha ibe ngeyakho.
Ukuxhumana kwama-TV akwa-Sony kufana namanye ama-TV ekwenzeni isibuko izithombe kusuka ku-iPhone kuya ku-TV nge-AirPlay, okuvumela ukuxhuma i-TV ngamadivayisi anjengamakhompyutha aphathekayo (usebenzisa isiphequluli se-Chrome), amafoni e-Android, njll. .. ukwenza izithombe, amavidiyo,.. .ku-TV nge-ChromeCast kanye nohlelo lokusebenza oluzinikele,… olulula kakhulu futhi luyashesha.
I-Sony BRAVIA TV ene-interface ye-Google TV
5Qhathanisa ama-Smart TV i-Samsung, i-LG, i-TCL ne-Sony
Isixhumi esibonakalayo se-Tizen nesixhumi esibonakalayo se-Smart Hub ochungechungeni lwe-Smart TV.
Ukuhlelwa kwezimpawu esikrinini kuyaqondakala, kulula ukukusebenzisa, kusiza abasebenzisi ukuthi bathole izinhlelo zokusebenza ngokushesha nakalula.
I-WebOS interface kanye ne-Smart Simple interface kuye ngemodeli ye-TV.
Kubasebenzisi abadala, izingane ezincane, kanye nabantu abangajwayelene kangako nemikhiqizo yobuchwepheshe, izofaneleka i-TV, ngoba kulula ukuyisebenzisa.
Isistimu yokusebenza ye-Android 11 ene-interface enhle, isitolo sezinhlelo zokusebenza esicebile.
Ngohlelo lokusebenza lwe-Android 11, ungasebenzisa izithombe ezilindile (i-Screensaver) ukuze uguqule i-TV yakho ibe wuhlaka lwesithombe sobuciko obuhle khona kanye esikhaleni sakho sasekhaya.
Ayigcini nje ngokuba nesitolo sokuzijabulisa esicebile, kodwa futhi inikeza umuzwa ongcono womsindo nokusebenza okushelelayo ngokulungiselela ukucushwa ku-TV.
Isixhumanisi se-Android TV nesizukulwane esisha se-Google TV.
Nokho, uma ungena ezicini ze-TV, zisekhona izindawo eziningi lapho ukuqanjwa kwamagama, kusetshenziswa amagama amade futhi okunzima ukuwaqonda.
Izicelo ezitholakalayo njenge: YouTube, Netflix, ..
Ungalanda okwengeziwe esitolo sohlelo lokusebenza noma ulande izinhlelo zokusebenza zangaphandle usebenzisa ifayela le-APK.
Izicelo ziyatholakala njenge: YouTube, Netflix, … nezinye izinhlelo zokusebenza zingalandwa ku-LG Content Store.
Ayikwazi ukulanda izinhlelo zokusebenza zangaphandle kusetshenziswa amafayela e-APK.
Izinhlelo zokusebenza zifakwe kuqala ku-TV njenge: YouTube, Web browser, Google Play, …
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka futhi ukufaka izinhlelo zokusebenza zangaphandle usebenzisa amafayela e-APK.
Isitolo sezinhlelo zokusebenza ze-Google Play sicebe ngokwedlulele futhi sinezinhlelo zokusebenza i-Google kuphela enazo (i-Google Play Umculo, i-Google Play Game,…).
Ngaphezu kwalokho, ungalanda izinhlelo zokusebenza eziningi ngamafayela e-APK.
I-Smart One Remote enesakhiwo esihle, izici ezicebile
I-Smart control Magic iyirimothi elula kakhulu, abasebenzisi bangasebenza kahle ngerola njengegundane lekhompyutha.
Isilawuli kude sidinga nje ukunyakazisa kancane ukuhambisa igundane kusikrini se-TV.
Ukulawula okuhlakaniphile kulula ukulawula ngezwi lokubonga ukuze usekele ukulawula ngesi-Vietnamese.
Isilawuli kude futhi sengeza izinkinobho zokusetha ze-YouTube ne-Netflix.
Izilawuli ezisebenziseka kalula ezinamakhono akhelwe ngaphakathi okulawula izwi ngesi-Vietnamese ngosekelo lomsizi we-Google.
6Ingabe kufanele uthenge i-Smart TV i-Samsung, i-LG, i-TCL noma i-Sony?
Kusukela ekubuyekezweni okungenhla, kungabonakala ukuthi umkhiqizo ngamunye uzoba nezinzuzo zawo kanye nezici ezivelele, kuye ngezidingo zakho, ungakhetha uhlobo olulungile lwe-TV.
Nokho, ukuze uphendule umbuzo wokuthi ungayithenga yini i-Samsung, LG, TCL noma i-Sony Smart TV, sicela ubhekisele kulezi zizathu ezilandelayo:
Kufanele uthenge i-Samsung TV
Kufanele uthenge i-LG TV
Kufanele uthenge i-TCL TV
Kufanele uthenge i-Sony TV
Uma uthanda imiklamo ye-TV ehlukile, eyinkimbinkimbi nezibonisi zezithombe ezinhle.
Ngesivinini esihle sokucubungula, izici zokuxhuma okungenazintambo ezibushelelezi, ezizinzile, i-Samsung iyisinqumo esifanele.
Ama-LG TV anezinzuzo ezivelele ngokwekhwalithi yokubonisa kanye nokunethezeka nokuba lula lapho esebenza ohlelweni lokusebenza.
Uma ufuna i-TV esekela isilawuli kude esihle, ukusebenza okusheshayo, i-LG izoba isiphakamiso esihle kuwe.
Uma unesidingo sokuthenga i-Smart TV eshibhile, yiba nesisetshenziswa sikanokusho nesimanje.
Ikhwalithi yesithombe ehlaba umxhwele, engokoqobo enokugqama okuphezulu nemibala egqamile.
Uma ukwazi ukuxhuma isipika se-bluetooth, khona-ke i-TCL TV iyisinqumo esikulungele wena.
Jabulela ukuzwa izici ezihlukile ezivela ku-Google nezinhlelo zokusebenza ezicebile ku-Google Play.
Jabulela ukusebenzisa ukusesha ngezwi ngomsizi we-Google.
Njenge-TV enemibala yemvelo, emnene, ikhwalithi yesithombe esiphezulu
Sicela ubhekisele kwamanye amamodeli we-TV athengiswa kakhulu e-Dien May XANH:
Ngethemba ngolwazi olungenhla, uzokhetha kalula ukuthengela umndeni wakho i-TV. Uma unemibuzo mayelana nomkhiqizo, ungashiya amazwana ngezansi noma uthinte inombolo yocingo ethi 1800.1061 ukuze uthole izimpendulo!
OPPO A15 Trắng Chính Hãng, Giá Rẻ, Trả Góp 0% | Muasalebang